Izinga Lokushisa Eliphezulu Metal Graphite Kuvunguza Inxeba Flange Gasket - CIXI DONGFENG SEALING & amp; Ukupakisha Co., Ltd
Ikhaya>Imikhiqizo>Kuvunguza Inxeba Gasket
Izinga Lokushisa Eliphezulu Metal Graphite Kuvunguza Isilonda Flange Gasket
I-gasket yesilonda esivuthayo iqukethe itheyiphu yensimbi ye- "V-shape" (noma "W-shape") yensimbi neteyipu engeyona eyensimbi, egqagqene futhi ilimale ngokuqhubekayo.Ukuqinisa ithephu yensimbi, zombili iphoyinti layo lokuqala nephuzu layo lokugcina lishiselwe nge-welding.
Ububanzi obubanzi bezimo zokusebenza ezamukelekayo. Ingasetshenziswa ngaphansi kwezinga lokushisa eliphakeme, ingcindezi ephezulu kanye nezinga lokushisa eliphansi kakhulu noma izimo zokuhlanza Shintsha inhlanganisela yezinto ze-gasket ukubhekana nenkinga yokugqwala kwamakhemikhali emithonjeni ehlukahlukene eya ku-gasket.
Hhayi izidingo eziqinile kakhulu ekucaceni kobuso be-flange. Ingasetshenziselwa ukuvala ama-flanges anendawo embi
Ukufakwa okulula nokusetshenziswa okulula.
Ukusebenza okuhle kakhulu
I-Spiral Wound Gasket egcwele i-Graphite
(Emvelweni Ye-Oxidizing) -240 ~ + 550 ℃ ； (Emvelweni Ongelona I-Oxidizing) -240 ~ + 870 ℃
(Ngaphansi kwamanzi ashisayo, uwoyela njll.) 30 MPA; (Ngaphansi kukawoyela womphunga, amagesi njll.) 20 iMpa
I-Spiral Wound Gasket egcwele i-Asbestos
Kuvunguza Inxeba Gasket egcwele PTFE
Ama-Gaskets Wound Wound asetshenziswa kakhulu kuma-valve & amapayipi, isitsha sengcindezi, i-condenser, ama-flanges wokushisa okushisa ezimbonini zika-oyela, zamakhemikhali, zensimbi, zomkhumbi nezomshini.